प्रेम पत्र…. – Kantipur Hotline
आकाश कि जुन भनौ कि धर्ती को फुल ? अधेरी रातमा जुनले बाटो देखाइ दिन्छ । फुल फुल्नाले धर्ती को शोभाब बढिरहेको हुन्छ । तेस्तै तिमी बिना मेरो जिन्दगी अन्धकार हुन्छ । त्यसैले यो उराँट लग्दो मरभुमीमा तड्पिरहेको जिन्दगी लाई खोइ कहाँ बाट सुरु गरु हरपल तिम्रो सुन्दर प्रतिविम्ब मेरो नजर वरीपरी घुमिरहन्छ। तर पनि यो मनको भाबना हरु तिम्रो सामु मैले ब्यक्त गर्नु नै पर्छ । मेरो सपनाको राजकुमार, मलाई विश्वास छ कि मेरो पवित्र मायाले तिम्रो विशाल हृदयलाई भरिदिन काफी छ ।
हो , जब देखि हाम्रो कुरा हुन थाल्यो, त्यस पछि का हरेक पलहरु हाम्रो लागि त्यति नै महत्वपुर्ण हुँदै गयो । साथै लामो जिन्दगीको साँघुरो गोरेटोमा हातमा हात समाएर सहारा दिने कसम खाँदै गएका छौ । मैले दुवैको एउटै गन्तव्य सम्झेको छु, हुन सक्छ तिम्रो अर्कै तिर गन्तव्य पनि छुट्टिन लागेको हुन सक्छ तर पनि म हेर्दछु टाढा सम्म तिमी मुस्कुराएर अघि बढ्दै जानु म तिम्रो छायाँ देखिञ्जेल सम्म हेरुलाँ अनि बहिरी आत्माले देख्नै छाडे पछि भित्रि आत्माले हेरुलाँ, तिमी बाँचुञ्जेल सम्म, आकाश धर्ती रही रहे सम्म…………… यदि अघि बढ्न सकिनौ भने पुन……पछाडी फर्कनु जहाँ उही तिम्रो जीवन यात्रामा सहयात्रीको भुमिका निर्वाह गर्न आतुर भएको त्यहि ठाउँ मा रहिरहने छ । अनि तिमि लाई तिम्रो प्रतिक्षा मा कुरिरहने छ ।
त्यो तिम्रो मुटु माझ मैले मेरो दिल बसाली सकेको छु । कोमल त्यो मुटुमा प्रेमको विउ रोपी सकेको छु । तिमी विनाको मेरो जीवन एक्लो अनि अपुरो हुनेछ त्यसैले तिमी समक्ष तिम्रो जीवन, तिम्रो माया भिक्षा मागीरहेको छु।आशा छ प्रेमका अञ्जुलीमा प्रेम र मायाको भिक्षा मागेको भिक्षुलाई रित्तै हात र्फकाउने छैनौं । तिमी मेरो हृदयमा अजम्वरी भई बसेका छौ।तिम्रो त्यो अतुलनिय एंव अवर्णनिय हिमाल जस्तो मुस्कान साथै सुर मिलाएर बजाएको मीठो संगितको धुन जस्तो तिम्रो बोली अनि फक्रिएको गुलाफ जस्तो तिम्रो रुपले पहिलो भेटमा नै मलाई मोहोनि लगाएको छ । जुन दिन तिमीलाई देखे त्यही दिन देखि माया को अनुभूति पाए सोहि दिन देखि मेरो मन मस्तिष्क तिम्रो सेरोफेरोमा घुम्न थालेको छ।
त्यसैले त आज मनका भावनालाई तिमी सामू छर्लङ्ग पार्न यो पत्र लेख्दै छु । आशा छ यो पत्र तिम्रो लागि प्रिय बन्ने छ । कता–कता डर पनि लाग्दैछ ।अव तिमी नै अनुमान गर म तिम्रो मायाँमा कति गलिसकेको छु। म तिम्रो प्रेमको खातिर आफुलाई नै विर्सिसकेको छु । सम्झन्छु त म तिम्रो चन्द्रमा झैं हसिलो मुहार त्यही प्रतिविम्ब जसले मलाई सधै लामो जिन्दगी जिउने प्रण गरिरहेको छ । म प्रेम गर्छु त केवल तिमीसँग ।तिम्रो अनुपस्थितीमा मेरो जीवन नै मृत्यु मा परिनित हुने छ । त्यसैले फेरि पनि भन्दैछु कि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु औधिक माया हार्दिक माया हामी बीचको पवित्र प्रेमको बन्धन यो जन्ममा त के सात जुनी सम्म पनि रहिरहने छ ।त्यसैले त ………………… तिमी बिनाको जीवन मेरो संसार शुन्य र अध्यारो हुनेछ . तिमीलाई एकै छिन नदेख्दा एक छिन कुरा गर्न नपाउदा पनि म साह्रै दुःखी हुन्छु । म भन्दैछु मेरो माया हृदयको धडकन…………………..तिमी जे सम्झ मलाई यो मायारुपी अक्षर कोर्ने लाई पागलपनको झंकार नै किन नसम्झ । तिम्रो माया र प्रेमको खातिर मेरो हृदयमा ठूलो भूकम्प चलिरहेको छ ।
अव तिमी नै भन प्रिय अव म के गरौ ? जे होस तिमीलाई आफ्नो सम्पूर्ण जिबन सम्झेको छु र आफुले आफुलाई तिमि प्रति समर्पित गरेको छु ।तिमीले यसलाई मेरो माया लाई पागलपन सम्झ या त घृणा नै सम्झियौ भने पनि म त्यसलाई तिम्रो चोखो प्रेम र मायाको प्रसादी सम्झि स्वीकारौंला । तर मलाई यस्तो लाग्दैछ की तिमी त्यती निष्ठुरी वन्ने छैनौं र मलाई छोडेर टाडा सात समुन्द्र जाने छैनौ । तिमीले मेरो निश्छल र पवित्र मायालाई बुझ्ने छौं किनकी तिम्रो हृदय पत्थर झैं कठोर अवश्य छैन् ।
मनको जमिनमा प्रेमको विज रोप्ने आफ्ना कल्पनालाई मूर्त रुप दिने आफ्नो चाहानाको बाध बाँधेर स्वर्णिम संसारमा हराउने आंकाक्षा कसलाई पो नहोला र रु त्यसैले प्रेम आँखाले होइन हृदयले देख्छ प्रिय । यथार्थ प्रेमका अभिव्यक्ति कानले होइन मनले सुन्छ प्रिय् त्यसैले बहिरो पनि हुन्छ प्रेम । यदि तिम्रो जवाफ नकारात्मक पाएँ भने म मा सहने क्षमता त छैन रु तर पनि तिमीले मलाई साथ दिनै पर्छ । माया गर्नै पर्छ । भनेर जर्वजस्ती गर्ने म मा सामर्थ्य छैन र सो कार्य गर्न मेरो नैतिकताले पनि दिदैन ।
किनकि मैले तिमि लाई बुझेको छु अनि तिम्रो परिस्थति संग ज्ञात पनि छु । किनकी प्रेमले घृणाको उपचार गर्दछ र प्रेम ले नै मानिस लाई बदल्छ ११ तिम्रो जिन्दगीको भबिस्यको चाबी तिमी सँगै छ त्यसैले तिमी आफ्नो निर्णयआफै गर्न सक्छौ । मलाई छोडेर कतै नजाउ त भन्न सक्दिन ।किन भने तिमि अहिले जुन ठाउँमा उभिएर मलाई माया गरि रहेको छौ त्यो अत्यन्तै कठिनाई पूर्ण छ । हो त्यहि भएर त्यो नै मेरो लागि महान हो प्रिय तिमि मेरो आदर्श हौ साच्चै भन्दा तिमि ले नै मलाई खदेरिमा सुकेको रुखलाइ फेरि हरियाली दिएका छौ ।
तिमी आफ्नो हृदय र आत्मालाई साक्षी राखेर सोध आफुलाई र आत्माले र हृदय अनि मनले जे उत्तर दिन्छ त्यही उत्तर मलाई देउ । यदि तिमीलाई म माथि शकां र सन्देहको कुनै छाँया सम्म छ भने अस्विकार गरिदेउ । तिमि जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि म त्यहि हाम्रो मायाको साहारामा बाच्नेछु । केवल तिमि फर्की आउने आश लिएर मेरो पुरा जिबन तिम्रो नाम मा समर्पित गर्ने छु । सम्झ त एकछिन तिमी मेरा वन्न सकेनौ भने मेरो माया कति निसासिन्छ रु मेरो जिन्दगी कति निरास बन्न पुग्छ होला ११ तिम्रो हृदयले जे लेख्छ, जे बोल्छ, त्यही मलाईउत्तर देउ । म तिम्रो प्रतिक्षामा कुरिरहने छु । यो लेख देख्नासाथ तिमि लाई अनौठो त पक्कै पनि लाग्ला तर पनि, यसलाई तिमिले अमिट माया सम्झेर हृदय भरी मुटु उहि तिम्रो पाग्ल प्रेमी …………………….
कोरोना भाइरसबिरुद्ध साझा रणनीति योजना बनाउन सार्क राष्ट्रबीच आज भिडियो कन्फरेन्स हुँदै